I-Pin HD nganye egobileyo yesikrini se-LED esendlwini yiprojekthi yeCasino
Imithombo yeendaba yentengiso itshintshile ukusuka kumaphephandaba oonomathotholo kunye neencwadi zisiya kwinethiwekhi yangoku kamabonakude nakwimbonakalo ye-LED yangaphakathi / yangaphandle. I-eachinled iyaqhubeka nokufunda izinto ezintsha, iyenzile indawo yayo kwishishini lokubonisa. Siyaqhubeka nokwandisa iimarike zaphesheya, kwaye simisela ubudlelwane bexesha elide kunye nabaxumi bamazwe ahlukeneyo kwihlabathi liphela.
Iprojekthi yethu yamva yeyomthengi wamandulo waseCyprus, le projekthi yi-20.736mx2.304m P3 i-LED egobileyo, Inkcazo ngolu hlobo lulandelayo: i-nationstar SMD2121 izibane ezimnyama, i-5124IC, i-Meanwell yokubonelela ngombane, iprosesa yevidiyo ye-LVP7000 enamandla.
Xa bezifaka, bafumanisa ukuba ezinye iingxaki ziye zavela, kunzima ukuba bazisombulule, sagqiba kwangoko ukuba sithumele injineli yethu ukuba incedise, Kwimizamo yethu yokudibana, yonke into ilungile ukugqibezela. Inkampani, banelisiwe yinkonzo yethu kunye nomgangatho wemveliso, Siqhubekile sasebenza kunye iminyaka eliqela.Siyathemba ukuba singasebenzisana neprojekthi ngakumbi kwixa elizayo kwaye sibe nophuhliso lweshishini eCyprus nakwimimandla yeMeditera.
I-eachinled ibisoloko isendleleni eya kwilizwe ukuzisa esona sisombululo sihle, Uphi? iqabane lethu elithandekayo!